MUQDISHO, Soomaaliya – Hogaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu dhaleeceeyay in aysan ka hadlin dhacdadii sideeda muwaadin dil wadareedka loogu geystay degaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Cismaan Muxyadiin Shaatax, gudoomiyaha Dalada Ururada Bulshada Rayidka Soomaaliya oo tacsi u diray ehelada marxuumiinta, ayaa ficilkaas ku sifeeyay mid gabi ahaanba shaqo ku ahayn kana fog "bini'aadanimada".
Shaatax oo sheegay in uu si kulul u cambaareynayo xasuuqaas ayaa cod dheer ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay in ay madaxda ka hadlaan dhacdadaas oo uu soo jeediyey in lagu sameeyo baaritaan madax-banaan oo dhaba.
"Marka labaad waxaan aad u cambaareynayaan falkaas oo ah wax aad looga xumaado oo bini'aadanimadana ka fog; runtii waa wax aad looga xumaado in madaxda dalka aysan wali ka hadlin, waxaana ugu baaqeynaa ka hadlaan; aamusnaanta waxay ka dhigan tahay in aysan gudaneyn mas'uuliyadda meesha ka saaran, waxaana ay hoos u dhigi kartaa kalsoonida shacabka ku qabi karo dowladooda hadii ay madaxda ka aamusayaan dhacdooyinka noocaan ah," ayuu ku sheegay wareysi uu siiyey Raadiyaha maxaliga ah ee Kulmiye.
Sideeda marxuum oo todoba kamid ah ay ahaayeen xirfadlayaal caafimaad kana shaqeynayay MCH-ka degaanka, ruuxa kalena uu mehrad ku lahaa nawaaxigooda ayaa la qafaashay maalin kahor inta aan la helin meydadkooda.
Illaa iyo haatan ma cadda waxay ahaayeen kooxaha hubeysan ee geystay falkaas. Dadka degaanka waxay eedeeyeen ciidamadda dowladda, halka xukuumadda federaalka ay si aan toos ah ahayn ugu eedeysay Al-Shabaab.
Dhacdadaan ayaa waxay mar kale sarre u qaadeysa walwalka ku aadan in dadka shacabka ay yihiin dhibaneyaasha ugu balaaran ee falal amni darro ee ka dhaca Soomaaliya, oo ay ka dambeeyaan kooxo ka baxsada cadaaladda.
Soomaliya 14.01.2018. 22:20
Dhimasho ka dhalatay weerarkii Al-Shabaab ee xerada Hiilwayne
Soomaliya 12.12.2019. 00:35